WANLAWEYN: Mootooyinka Saddex Lugooleyda ah oo fududeyneysa nolosha reer Miyiga – SOMA: Somali Media Association
Mootada reer Miyiga ay adeegsadaan
Isbadal ayaa ku yimid hab nololeedka dadka ku nool miyiga Gobolka Shabeellaha hoose, shantii sano ee lasoo dhaafay kadib markii ay heleen gaadiid qiimo yar oo fududueeya howlaha dadka ku nool miyiga ee ka adeegta magaalooyinka.
Badankood reer miyigu hadda waxay gaadiid ahaan u isticmaalaan Mootada loo yaqaano Saddex lugaaleyda halka markii ay isticmaali jiray gawaarida waaweyn iyo xoolaha la rararto sida Awrta iyo dameeraha.
Maxamed Cabdow ismaaciil oo ah beeraleey ku nool tuulada Fuulaay-dheer oo hoos timaada degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegay in xilligii hore ay gawaari waa weyn iyo xoolaha rararto uu isticmaali jiray, islamarkaana uu ku qabay dhibaatooyin ay ka mid yihiin qiimahahooda oo qaali ah iyo sida in saacado badan ay qaadan jirtay in ay magaalada gaaraan markii ay xoola wataan.
Waxaa uu tilmaamay in shantii sano ee lasoo dhaafay uu isticmaalayay mootada loo yaqaano Saddex Lugaaleyda oo si weyn uga shaqeysa gobolka Shabeellaha Hoose, islamarkaana uu ka helay qiimo badan, waqtiga oo deg deg ah iyo xilli walba oo la heli karo.
Waxaa uu SOMA u sheegay in markii uu soo aado magaalada oo u adeegto ay ka baxdo wax ku dhow hal dollar, islamarkaana ay tahay qiimo uu awoodo kuna filan halka markii hore uu soo lugeyn jiray Saacad illaa saacad & bar, sidoo kalena uu sii lugeyn jiray.
“Mootada ayaa noo fiican sabobto ah adeeg deg deg ayaan u aragnaa dhaqan fcn ayaan ku heysana waxaana u aragnaa mootada inay waxtar leedahay hawsheyda waxay iigu sahashay markasta beerta aan rabo ama magaalda rabo iyada ayaan isticmaalnaa. Mootyinka marhore lacg fcn ma dhiibeynin 15kun 20 kun ayaan dhiibnaa wax dhibaata ah kuma qabno wax qasaare ah dhana makala kulano”
Isbadalka nololeedka ee ku yimid dadka ku nool miyiga gobolka Shabeellaha Hoose ee u badan beeraleyda iyo xoolaleyda waxaa shaqo abuur ka helay dhallinyaro , kuwaasoo ku shaqeysta mootooyinka ay raacaan dadkaan.
Xuseen Xasan in ka badan Aafar sano ayuu ku shaqeynaya mootada loo yaqaano Saddex Lugaaleyda waxaana uu ka dabaraa nolol maalmeedka laba xaas iyo caruurtiisa, isagoona qaada dadka miyiga kasoo gala ee magaalada u soo adeegtoonta si maalinle ah.
Xuseen waxaa uu xusay isbadal dhaqaalle uu ku yimid sanadihii dambe kaddib markii ay si weyn u fahmeen reer Miyiga in ay raacaan mootaddaan oo aysan raacin gaadiidka waaweyn, islamarkaana uu markii hore dhibaatooyin dhaqaalle maadaama uu ku shaqeyn jiray gaari gaari dameer.
Xuseen Xasan ayaa xusay inay leeyihiiin goobo ugaar ah oo lagu cilad bixiyo mootooyinka oo iyadana ay shaqa abuur u noqotay dhallinyaro kale oo farsamayaqaano ah.
“Waxaa igu dhaliyay inaan kasoo guuro isadalka waqtiga waxyaba badan ayaan ka badlay nolol maalmeedkeyga dhaqaalaheyga waxyaaba badan ayaan u adeegsadaa sida beeraha gaari dameerka Meesha rabtd mau bixi kartid meel hadii ay tacsiyo ka dhacdo qofka homey ma awoodo waxay ku beyxeysa 600, 700, 800 bahashaan waxay ku fududahay 150 ayaa ku baxeysa waxaan kusoo gaday $1,700 wax dhibaato aan kala kulmay malahan”
Qaar ka mid ah dadka mudda dheer ku noolaa gobolka Shabeellaha Hoose ayaa aaminsan in tani ay tahay markii ugu horreysay oo dadka miyiga ku nool ay u muuqdaan in ay ka guuraan rarashada xoolaha ayna aadayaan nolosha casriga ah.
Nabadoon Abuukar Cabdi Moomow oo ku dhawaad 50 sano ku nool degmada Wanlaweyn ayaa sharraxaad ka bixiyay sida uu isku baddelay hab dhaqanka nolosha dadka reer Miyiga ah, islamarkaana waxaa uu faah-faahiyay waxyaabihii ay markii hore ay isticmaali jireen dadkaasi ee hadda laga guuray.
Waxaa uu sidoo kale SOMA u sheegay in hadda nolosha ay ku jiraan ay uga faa’ido badan tahay midii hore, islamarkaana looga baahan yahay in ay sii waddaan horusocodkaasi dhanka nolosha ah, maadaama maalinwalba dunida uu isbadal ka dhacayo.
“Isbadalka dhaqanka umadda Soomaaliyed waxay sameyn jireen oo ay ku dhaqmi jireen awr ama qurbac ayaa hori lasari jiray msigada lasaari jiray taas ayeey awoow yaalkeen ogaayeen waxaa lagu badalay gaari dameer iyo baabur wax yaabo badana imaaday siteey hada waxaa imaaday mooto oo booskaas buuxiyay oo lagu adeeganaaya balad iyo baadiyo.
Faa’iido mootada fcn fuded iyo wax walbo mootooyinka meeshii ay kasoo lugeen lahaayeen labada habeen hadal aba saac ama sedex saac ayy kuimaanayan reer baadiyaha dan weyn ayaa ugu jirto baadiyo ahaan hawshooda oo dhan ay fududeysa reer magaalka xataa gaari dameerki suuqa ka shaqeyn jiray hada mooto ayy isticmaalan”
WQ: Maxamed Cabdiraxmaan oo ka tirsan Radio Wanlaweyn